Falanqeynta Kulanka Manchester United Vs West Ham United Ee Koobka FA-cupka
HomeWararka CiyaarahaFalanqeynta Kulanka Manchester United Vs West Ham United ee Koobka FA-cupka
February 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Manchester United iyo West Ham United ayaa wada ciyaaridoonaa wareega 8da ee FA Cup xili Man United ay bar-baro adag kala kulantay kooxda Everton kulankeeda ugu danbeeyay ee Horyaalka.
Kulanka Manchester United Vs West Ham United
Tartanka FA Cupka
Saacada 22:30 Waqtiga Somaliya
Phil Jones ayaa muddo dheer ka maqnaanaya kooxda Manchester United dhaawac jilibka ah. Eric Bailly ayaa shaki ku jiraa ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii Everton. Laakiin waxa ugu weyn ee ay ka walwalayaan ayaa ah Paul Pogba, kaasoo garoonka laga saaray qeybtii hore ee kulankii Toffees ka dib markii uu dhaawac muruqa ah la jiifay.
Waxay u badan tahay inuusan ciyaarin Talaadada. Dean Henderson ayaa laga yaabaa inuu ka soo muuqdo goolka kooxda Manchester United laakiin haddii taasi ay xiriir la leedahay qaab ciyaareedkiisii ​​xumaa ee kulankii Everton ayaan weli la xaqiijin.
West Ham United ayaa baaqi ku sii ahaan doonta adeega Arthur Masuaku. Waxay sugi doonaan inay arkaan haddii roosadii Tomas Soucek ee casaanka ahayd ee Fulham la rogay. Jesse Lingard kama ciyaari karo kulankan madama lagu dhacayo Manchester United.
Dhacdooyinka Labada Kooxood Dhexmaray
Tobankii kulan ee ugu dambeeyay ee dhexmara kooxaha Manchester United iyo West Ham United, United ayaa aheyd kooxda ugu awooda badan.
Red Devils ayaa badisay shan ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay Hammers, seddex jeerna barbaro ayay galeen labo jeerna waa laga badiyay.
Markii ugu dambeysay ee ay labadan koox kulmaan waxa ay aheyd Premier League oo lagu qabtay London Stadium, markii Manchester United diiwaan gelisay guul 3-1 ah goolasha ay dhaliyeen Paul Pogba, Mason Greenwood iyo Marcus Rashford